🥇AI ahia maka ndi mbido: Chọta ihe kacha mma AI Trading Platform March 2021
AI Trading for Beginners: Chọta ihe kacha mma AI Trading Platform 2021
Chọta ihe kacha mma AI Trading nyiwe maka ndị mbido, bido na $ 250 ka ikwe ka robot ọgụgụ isi maka gị, gụọ akụkọ 2021 anyị.
Sonyere anyị ma malite Inweta Ọgaranya na MediaRave!
Mgbe ụmụnne abụọ zukọtara, otu na-enwe mmasị na algọridim na ọnụọgụ ebe onye nke ọzọ bụ onye na-azụ ahịa ọkachamara n'ịntanetị, ị ga-enweta ezigbo mma. Anyị abụọ nwere mmasị n'ịzụ ahịa n'ịntanetị, mana ọ bụ agụụ m. Achọrọ m ụzọ ka mma ma dị mfe iji na-azụ ahịa, yabụ anyị mechara mepụta MediaRave.
Tụkwasịrị Obi Performance
Urenọ ná Ntụkwasị Obi na Nkeonwe
Gaa Leta MediaRave
Amamịghe echiche (AI) bụ teknụzụ na-apụta nke na-eruteghị ogo ya. N'ezie, ohere nke ihe AI ​​ga-emezu otu ụbọchị enweghị njedebe. Site na nke a, AI ka na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị mkpa.
Ma ọ bụ Facebook na-atụ aro ọdịnaya nke kwekọrọ na akụkọ ihe mere eme gị ma ọ bụ Amazon na-atụ aro ngwaahịa dabere na ịzụta mbụ - AI nwere ikike karịa ụbụrụ ụbụrụ mmadụ n'ụzọ dị anya.
Site na nke a, ejirila ụdị dị iche iche nke AI na ahịa ego maka ihe dị ka afọ iri atọ. Nnukwu ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ na-adabere na algọridim ndị a karịa ahịa ndị ahụ na-agbanwe agbanwe. Ka o siri dị, ọ bụ naanị oge tupu azụmaahịa azụmaahịa AI erutela ọnụahịa mkpọsa.
Ọ bụrụ n 'ịchọrọ ịmụ ihe na azụmazụ nke azụmaahịa AI bụ, otu o si arụ ọrụ, yana kedu nyiwe na-enye gị ohere ịzụta ma ree akụ n'ụzọ kwụụrụ onwe - ijide n'aka ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị AI ahia maka ndi mbido.
Rịba ama: AI ahia ngwanrọ bụ naanị ihe dị mma dị ka algorithm na-akpata. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na e mepụtara sọftụwia ahụ n’ụzọ ọjọọ, ị ga-efufu ego.
Gịnị bụ AI Trading?
Okwu a bu 'AI Trading' bu ihe sara mbara, obughi ihe kariri n'ihi na o nwere ike ikpuchi otutu uzo ahia di iche iche. N'ime ụdị ya kachasị mkpa, ịzụ ahịa AI na-ezo aka n'ịzụ na ire nke akụ na-enweghị mmekọrịta ọ bụla mmadụ. Kama nke ahụ, sọftụwia ahụ na - akpata ya ga - azụ ahịa na nnọchite gị - dabere na ọnọdụ nke enyerela ya ịgbaso.
Maka ndị na-amaghị, echiche kachasị mkpa nke AI bụ na ọ nwere ikike iji nyochaa ọtụtụ nde ihe nwere ike ime na nkeji nkewa. Ọ na-eme nke a site na inyocha ọtụtụ ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme, wee mezie mkpebi dabere na ozi ọ nwere maka ya.
Ọ bụ ezie na nnukwu ụlọ ọrụ ego nwere ohere ịnweta ụfọdụ robot ahịa AI kachasị elu, ha na-echekwa software dị n'okpuru nke ọma n'oge niile. Nke a na-egbochi ha 'Nzuzo Nzuzo' site na ịbanye na aka ọjọọ. Dị ka ndị dị otú a, ndị ahịa na-ere ahịa nwere obere ohere n'otu ọkwa nke AI trading algorithms dị ka ndị ọrụ ụlọ ọrụ ha.
Na na-ekwu, e nwere ọtụtụ nke online nyiwe na-enye gị ohere ahia na akpaghị aka n'ụzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị dị elu dị ka bots AI nke ụlọ ọrụ ego nwere, ndị a na-eme ma ọ dịkarịa ala na-enye gị ohere ịzụ ahịa na akpaghị aka - na-enweghị ihe ọ bụla a chọrọ iji zụta ma ree akụ na ntuziaka.
Kedu ihe bụ uru na ọghọm nke azụmaahịa AI?
AI nwere ikike karịrị ụbụrụ mmadụ
Enweghị ịdabere na mmetụta mmadụ ma ọ bụ mmetụta afọ
Ahịa 24/7 - AI anaghị enwe ike ọgwụgwụ
Ike ahia ọtụtụ ahịa n'otu oge
Na-azụ ahịa oge niile n'ụzọ kwụ ọtọ
AI ahia ahia di nma dika algorithm na-akpata
Otu mmewere nke ọrụ aka achọrọ iji melite ntọala azụmaahịa gị
Kedu ka AI Trading si arụ ọrụ?
Yabụ ugbu a ị nwere nyocha nke ihe azụmaahịa AI bụ n'ezie, ka anyị chọpụta etu ọrụ ahụ si arụ ọrụ. Na nkenke, AI na-etinye aka na algorithm nke akọwapụtara tupu oge eruo nke nwere ikike itinye azụmaahịa n'ụzọ kwụ ọtọ - yana mkpebi ndị dabere na data akụkọ ihe mere eme. Dịka anyị kwuru na nkenke na ngalaba dị n'elu, ụlọ ọrụ ego nwere ụfọdụ bọọdụ azụmaahịa AI kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ wee si otú a na-aga n'ihu karịa ahịa.
Agbanyeghị, na oghere azụmaahịa, ị gaghị enwe ike ịbanye na robot dị ka onye ruru eru dịka ihe ogige ụlọ ọrụ nwere. Kama nke ahụ, ị ​​ga-azụta usoro ngwanrọ nke algorithm nke onye ọzọ mere. A ga-emepụta sọftụwia dị n'okpuru na 'gịnị-ma ọ bụrụ', nke pụtara na teknụzụ ga-arụ ọrụ mgbe ọnọdụ ụfọdụ zutere.
Ka anyị lelee ihe atụ dị ngwa iji kpochapụ alụlụụ.
Ihe Nlere nke Ahia ahia
Ka anyị kwuo na ịzụrụ robot AI nke ọkachamara na Forex ahịa. Emegoro ngwanrọ a ka etinye usoro ịzụta na isi ụzọ mbu mgbe ọkwa Fibonacci Retracement rutere 61.8%.
N’okpuru, anyị edepụtala ụfọdụ usoro ‘ihe-ma ọ bụrụ’ usoro nke robot AI nwere ike iwere.
GBP / USD dakwasịrị ọkwa Fibonacci Retracement nke 61.8%.
Nke a pụtara na AI robot 'gịnị-ma' ọ bụrụ na ezutela ọnọdụ.
Ka o siri dị, bot na-etinye iwu ịzụta na GBP / USD.
The bot na-awụnye ụfọdụ ịkwụsị-ọnwụ na -e-uru iwu.
The bot na-gwara mechie ahia ma ọ bụrụ na GBP / USD na-abawanye site na 45 pips.
A na-enyekwa ya iwu imechi ahịa ma ọ bụrụ na GBP / USD belata 10 pips.
2 awa mgbe etinyechara ahịa ya, GBP / USD na-abawanye site na 45 pips, yabụ emechiri ahịa ahụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, AI trading bot nwere ike itinye ọtụtụ iwu na-enweghị mkpa ịme ọrụ ike ọ bụla. N'ezie, ọ bụghị naanị na bot scan scan of data akụkọ ihe mere eme na GBP / USD, mana ọ dị njikere 'pounce' na niile isi ego. Dị ka nke a, ihe atụ a na-egosi etu ike ịmebe bot wee rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na emebere ya nke ọma.
Kedu uru nke AI Trading?
Yabụ ugbu a ị ghọtara nke ọma ihe azụmaahịa AI bụ na otu ngwanrọ ngwanrọ nwere ike isi rụọ ọrụ, ka anyị lelee ụfọdụ atụ dị egwu nke azụmaahịa AI na-enye.
An Nyocha data na-enweghị njedebe
Otu uru bara uru n'iji robot ahịa AI bụ ikike ya ịme nyocha data na-akparaghị ókè. Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa nwere oge, ị ga-amata ụzọ dị mkpa nyocha ọrụ aka si dị ahia n'ịntanetị. Na-enweghị ya, ị gaghị ebu ngwá ọrụ achọrọ iji tinye azụmaahịa na-aga nke ọma na ndabere.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị bụ onye na-azụ ahịa ngwa ahịa bara ụba. Nke a nwere ike ịgụnye ihe ọ bụla sitere na ọla edo, ọla ọcha, platinum, mmanụ, gas nkịtị, ọka wit, na ọtụtụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'ikwu eziokwu, ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume iji oge dị mkpa nyochaa data akụkọ ihe mere eme niile nke ngwaahịa ndị ahụ e kwuru n'elu. Kama nke ahụ, ndị ahịa nwere ahụmahụ ga-abụkarị niche n'otu akụ.
N'otu aka, nke a bara uru n'ihi na ọ na - enye gị ohere ịnweta nka na klaasị otu akụ, kama ịnwa ịbụ 'Jack of All Trades'. Agbanyeghị, nke a pụtakwara na ị nwere ike ịhapụ ohere ị ga-enwe ohere ịzụ ahịa.
Ka ekwuru nke a, mmemme sọftụwia AI nke emebere nke ọma nwere ikike ịme nyocha teknụzụ dị elu na klaasị klaasị ịchọrọ. Dị ka ndị dị otú a, bot ahụ na-arụsi ọrụ ike maka gị, na-eme ka ị nwee ike iweghara onwe gị ozugbo ị nwere nchọta data dị mkpa n'ihu gị!
Akwụsịla Trazụ ahịa
Ma ị bụ onye ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ onye na-etinye ego n'oge nwere ọtụtụ afọ n'okpuru belt gị - enwere naanị oge buru ibu ị nwere ike itinye n'ọrụ gị. Ọbụghị naanị na nke a gụnyere ọkwa nnakọta data, mana usoro izizi ahịa, kwa. Ndị na-anwa ịgba ọkụ ọkụ ahụ ga-achọpụta n’ikpeazụ na a na-etinye azụmaahịa n’ụzọ enweghị isi.
Nke a abụghị ihe dị iche na ndị na-achịkwa ụgbọ elu ikuku chọrọ ka ha nwee ezumike mgbe awa ọ bụla nke ntinye, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na ọrụ ahụ chọrọ nraranye nke uche na nke anụ ahụ. Site na nke a, iji usoro azụmaahịa AI ga-enye gị ohere ịzụ ahịa 24 awa kwa ụbọchị, ụbọchị 7 kwa izu. N’ụzọ dị oke mkpa, ọ nwere ike ịme ya n’enweghị ezi nsogbu nke ike ọgwụgwụ na enweghị isi.
🥇 Na-ahia Ahia ọ bụla
N'ihe yiri ya na ike ọgwụgwụ ahia, ị ga-enwe ike ịzụ ahịa ụfọdụ n'ọma ahịa n'oge ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ị gaghị enwe ike ịzụ ahịa ma Tokyo Stock Exchange na na NASDAQ, obughi ihe kariri n'ihi ihe di iche na oge elekere iri na ano.
Nke a bụkwa ikpe maka ịzụ ahịa na London Stock Exchange na Australian Securities Exchange. Ya mere, ị ga-azụ ahịa ahịa nke yiri mpaghara mpaghara gị.
Otú ọ dị, site n'iji ikike nke robot trading AI, ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ahịa dịka ịchọrọ - awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị 7 kwa izu!
Ngwụsị nke Ahịa Mmetụta
Otu n'ime ihe ndị bụ isi na nso 75% nke ndị ahịa niile na-ere ahịa n'ịntanetị na-efufu ego na ogologo oge bụ n'ihi na ndị mmadụ n'otu n'otu enweghị ike ijikwa mmetụta mmetụta uche nke mgbago na mgbada. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ahịa e chere echiche nke ọma na-aga n'ụzọ na-ezighi ezi, ndị na-ere ahịa ọhụrụ na-agbasi mbọ ike ịnakwere na nke a bụ akụkụ na azụmahịa. Na nzaghachi, ị ga-ahụkarị ndị ahịa na-enweghị uche na-etinye azụmaahịa na-enweghị isi na ebumnuche nke "ị nweta ihe ha tufuru". Nke a na - ebute njedebe na ala nke na - ahụ onye ahịa ahụ ka ọ tufuo ego ha niile.
Ọzọkwa, AI adịghị arụ ọrụ mgbaghara site na mmetụta uche nke ahịa ego, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na sọftụwia na-akpata dabere na ọnọdụ akọwapụtara tupu oge eruo. Ngwaọrụ AI ga-edebe ma zụọ ahịa dabere na ọnọdụ ndị a, yabụ na ọ nweghị ikike ime ihe na mpụga usoro ndị a. Dịka, site na tinye n'ọrụ AI na-ere ahịa robot ị nwere ike belata otu n'ime egwu kachasị egwu gị na bankroll ogologo oge - mmetụta uche!
🥇 Zuru oke maka ndi mbido na ndi ahia di elu
AI bọọlụ AI kwesịrị ekwesị maka ndị ahịa ọhụụ na ndị na-etinye ego oge. Banyere nke mbụ, ngwanrọ na-akpata na-enye gị ohere ịnweta ahịa ego na-enweghị mkpa ọ bụla tupu ahụmịhe. Kama nke ahụ, ị ​​ga-enye gị ikikere azụmaahịa AI iji zụta ma ree akụ ya n'ụzọ kwụ ọtọ.
N'ihe banyere ndị na-etinye ego n'oge, ndị na-ere ahịa AI na-enye gị ohere ịme ahịa ịzụ ahịa gị n'ịntanetị na ọkwa ọzọ. You'll ga-enwerịrị ike ịkọwapụta data data buru ibu karịa, zụọ ahịa ruo ọtụtụ awa ka ịchọrọ, ma nweta ọnụ ọgụgụ ahịa na-akparaghị ókè.
Kedu ihe ize ndụ nke AI Trading?
Ọ bụ ezie na uru ndị anyị nyere na ngalaba nke dị n'elu na-eme ka robot bụrụ atụmanya na-adọrọ adọrọ, ọ dịkwa mkpa ka ị tụlee ụfọdụ n'ime ọghọm dị na ya. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ịzụ ahịa AI dị mfe, ọ bụ na anyị niile agaghị eme ya iji kwe nkwa uru ebighi ebi? O di nwute, ahia AI abughi ihe nzuzu nke ihe 100%, ya mere kpachara anya nyochaa ihe ndi a.
⚡ Naanị nke Dị Mma Dị Ka Software Na-akpata
Dika anyi kwuru na otutu ntuziaka anyi rue ugbu a, ígwè agha dikwa nma dika sọftụwia kpatara. Echefula, mmadụ ga-eji aka ya kee, wuo ma zụọ sọftụwia ahụ ka ọ rụọ n'ọma ahịa ghere oghe.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na emeghị bot ahịa AI n'ụzọ dị irè, ọ ga-abụ na sọftụwia ahụ ga-efunahụ gị ego.
⚡ Shady AI Trading Ndị Na-enye Ihe
Ọ bụrụ na ị Google okwu ahụ bụ 'Best AI Trading Platform's' ', a ga-egosi gị ọtụtụ puku ndị na - enye gị nkwa na ị ga - enweta uru. N'ezie, ndị na-enye AI a ga-ekwupụta nkwuputa okwu karịrị nke dị adị n'ezie. Dị ka ndị dị otú a, ọ dị mkpa ka ị na-akpachapụ anya nke ọma tupu gị ejiri ego gị.
N'ụzọ dị oke mkpa, ị kwesịrị ịjụ onwe gị ihe kpatara ndị na-ere ahịa AI ga-eji kesaa 'nzuzo nzuzo' ha n'ihu ọha ma ọ bụrụ na sọftụwia na-akpata dị oke uru?
⚡ Ahịa nwere ike ịgbanwe n'oge ọ bụla enyere
Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịzụta azụmaahịa azụmaahịa AI na-aga nke ọma nke na - eme gị uru na - agbanwe agbanwe ruo ọtụtụ ọnwa na njedebe, enweghị nkwa na nke a mgbe niile bụrụ ikpe. N'aka ozo, ime nke ahia ego nwere ike igbanwe n'oge obula.
Nke a bụ ihe kpatara eji achọ ka ị gbanwee ma gbanwee mgbanaka AI gị na-agbanwe agbanwe iji hụ na atụmatụ ya ka dị irè. N'echiche a, ịzụ ahịa AI abụghị 100% kwụụrụ onwe ya, ebe ị ka kwesiri ịrara oge ụfọdụ na mmezi na-aga n'ihu.
Kedu otu m ga - esi họrọ bot AI Trading?
Yabụ ugbu a ị matara uru na ọghọm dị n'iji bot bot trading, anyị ga-enyocha ugbu a otu ị ga - esi chọta onye na - eweta gị iji gboo mkpa gị. Na ngwụcha, mmemme sọftụwia AI abụọ abụrụ otu, yabụ ịkwesịrị iji oge ụfọdụ chee echiche maka ihe ị na-achọ inweta.
✔️ Ntinye achọrọ
Nke mbu, ikwesiri inyocha onodu obula a gha acho gi itinye aka na inweta oru bot ahia gi. N'otu aka, ụfọdụ sọftụwia sọftụwia na-ebu ụzọ, nke pụtara na ị ga - eme ka robot rụọ ọrụ ma ọ ga - amalite ahia. Ọzọkwa, ị kwesịrị ịjụ onwe gị ma onye nrụpụta ahụ ọ ga-ahapụ atụmatụ ha nke ọma ma ọ bụrụ na ha enweta uru na-agbanwe agbanwe.
Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, enwere ike ịchọ gị ịhazi ọnọdụ azụmaahịa gị maka AI robot ịgbaso. Agbanyeghị na nke a ga - achọ ihe ịma etu esi arụ ọrụ n'ịntanetị - dị ka ịghọta ngosiputa teknụzụ na akara ngosi, ị nwere ike ọ gaghị enwe ahụmịhe nzuzo. Kama nke ahụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa AI na-enye usoro nhazi usoro.
Ebee ka AI AI Trading Software ga-arụ ọrụ?
Ikwesiri ịtụle ebe robot azụmaahịa AI nwere ike ịrụ ọrụ, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na ị ka ga-achọ onye na-ere ahịa ndị ọzọ iji nweta ahịa ahịa. N'ime ụwa zuru oke, robot ahịa AI ga-adaba na MetaTrader 4 (MT4) na MetaTrader 5 (MT5).
Nke a bụ n'ihi na narị otu narị ndị na-ere ahịa na ntanetị na-akwado nyiwe azụmaahịa ndị a, nke pụtara na AI algorithm gị nwere ike ịnwe ohere ịbanye n'ahịa ịchọrọ.
Class Klas nke Akwadoro
N'elu ịchọta bot azụmaahịa AI nke a na-akwado site na ntanetị azụmaahịa a maara nke ọma, ị ga-atụle ụdị akụ ịchọrọ ịzụ ahịa. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ezie na robot AI nwere ike nyochaa ụzọ abụọ, ọ nwere ike ọ gaghị adaba na ngwaahịa na òkè.
Ọ bụrụ na onye nrụpụta n'ezie dị njikere ịhapụ 'ihe nzuzo nzuzo' n'ahịa na-emeghe, ha ga-akwụ gị ụgwọ maka ihe ùgwù ahụ. N'ezie, ị ga-atụ anya ka ndị ahịa azụmaahịa AI kachasị mma na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ha ma ọ bụrụ na ha nwere ike igosi na bot na-enweta uru mgbe niile.
Ọ bụrụ na ha emee, nke a na - abịa dịka ndenye aha kwa ọnwa. Kwesịrị ịnọgide na-akwụ ụgwọ ndenye aha maka ogologo oge ịchọrọ iji azụmaahịa AI na-azụ ahịa n'ime ọhịa. Anyị na-ahọrọ ndị na-enye ọrụ na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa - na-akwụghị ụgwọ ego ewepụghị otu, ebe ọ na-ahụ na ndị mmepe ahụ na-arụ ọrụ na-aga n'ihu na ngwanrọ na-akpata.
✔️ Nyocha Ọha na Ọha na Resultszụ ahịa Akụkọ
Yabụ, ị chọtala azụmaahịa AI na-amasị gị nke ịchọrọ - mana kedu ka ị si mara ma ọ ga-arụ ọrụ n'ọma ahịa ma ọ bụ na ọ gaghị eme. Nke bụ eziokwu bụ na ị maghị ruo mgbe bot ga-adị ndụ. Agbanyeghị, enwere ihe ole na ole ị nwere ike ime iji nwekwuo ohere ịzụta bot ziri ezi.
Nke mbu, weputara oge inyocha nyocha di na mpaghara ndi mmadu. Ọ bụrụ na ị ga-eji ikpo okwu dị ka TrustPilot, dị njikere naanị na ọkwa dị n'ofe puku ndị ọrụ ekwenyero. Nke abuo, ihe ntanye ntanye ahia nke AI ga-ebiputa nsonaazụ akụkọ ihe mere eme nke enwere ike ikwenye. Dịka, hụ na bot na-arụ ọrụ nke ọma karịa ọtụtụ ọnwa na opekata mpe - mana ọkacha mma, opekata mpe otu afọ.
Ndị na - enye onyinye AI kachasị mma 2021
Ọ bụrụ na ị gụọla ntuziaka anyị ruo ugbu a, ị kwesịrị ịmara ugbu a ihe robot ahịa AI bụ na otu ha si arụ ọrụ, yana uru na ọghọm dị n'iji otu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ụda nke ngwa ngwa ngwanrọ akpaghị aka na-enye maka mkpa azụmaahịa gị ogologo oge, anyị ga-edepụta usoro azụmaahịa AI anyị akwadoro maka 2021.
Mara: Ndepụta ndị na-esote ndị na-enye ndụmọdụ gụnyere itinye azụmaahịa AI, azụmaahịa azụmaahịa AI, ahịa azụmaahịa AI na ahịa azụmaahịa AI.
1. Skilling– Kachasị mma Forex Trading Platform maka Beginners
Anyị na-na a ozi ike a pụrụ iche trading n'elu ikpo okwu ezubere iji na-egbobara ndị ahịa nke niile etoju, si beginners ndị na-azụghị na seasoned Uru. Anyị chọrọ ịmepụta ikpo okwu na-ejikọ mmadụ niile na ahịa ego nke ụwa ma gosipụta ikike ya na ha.
Azụmaahịa azụmaahịa nke emebere maka ndị ahịa nke ọkwa niile, site na ndị mbido rue oge uru.
$ 100 nkwụnye ego kacha nta, enweghị ụgwọ zoro ezo na ebubo niile gosipụtara n'ụzọ doro anya na ego akaụntụ gị.
Gaa na Nkuzi
2. CFD Trader - Bụrụ onye na-akwụ ụgwọ ego na azụmaahịa ọnlaịnụ
Ọ bụrụ na ị na-agụ nke a, ọ pụtara na anyị ka nwere ntụpọ ụfọdụ aka ekpe. Nke ahụ pụtara na ị ga-enwe ohere iji nweta uru kachasị ọsọ ị ga-ahụ, na ịnakọta uru nke € 261, € 7,541 na ọbụlagodi € 67,454 azụmaahịa mgbe azụmaahịa gasịrị. You nwere ike ịmalite ozugbo ị banyere aha gị, email, paswọọdụ, na akara ekwentị na nchebe na elu nke ibe a.
Na ihe niile ọ na - ewe bụ opekata mpe € 250 iji bido. I nwekwara ike ịdọrọ isi obodo gị mgbe ọ bụla ịchọrọ n'ihi na ị ga-enweworị akaụntụ nkwụnye ego guzobere!
3. Uru Uru Mee $ 1,500 Ka $ 4,200 Daily Na The World kasị ọgụgụ isi Trading Software
Teknụzụ ahia anyị pụrụ iche na-enyocha crypto na uru ụwa 24/7
4. Prime Advantage - Nweta ihe ruru $ 3,000 kwa ụbọchị bido taa
Sava anyị na-ekwe ka sọftụwia ahia anyị hụ obere mgbanwe na ọnọdụ azụmaahịa 3 nde nke abụọ tupu ndị ahịa Wall Street kachasị ọsọ
Ndị ọrụ nkwado anyị ga - ahazi ma nyochaa sọftụwia azụmaahịa gị iji bido ma nye gị ohere dị elu karịa ndị ahịa ọ bụla na ndị na - etinye ego. ma ọ bụ jụụ. Sọftụwia anyị na-agbanwe mgbe niile ma na-amụ ihe, na-agbanye n'ọkwa ahịa anyị ka anyị ghara ịhapụ ahịa.
Na nchịkọta, ọ bụrụ na ị gụọla ntuziaka anyị na AI Trading n'ụzọ niile, ị kwesịrị ịmara nwee nghọta siri ike banyere otu ihe ahụ si arụ ọrụ. Na nkenke, tinye n'ọrụ algorithm nke AI na-enye ọtụtụ uru - dịka ikike ịzụ ahịa na 24/7 ndabere, nweta ọtụtụ ahịa, nyochaa nnukwu data data, na azụmaahịa na-enweghị mmetụta. Site na nke ahụ, ị ​​ka kwesịrị ichebara echiche dị oke mkpa gbasara ihe egwu dị na ya.
N’ụzọ dị oke mkpa, ọ nweghị nkwa ọ bụla na onye na-eweta azụmaahịa AI ahọpụtara dabara adaba maka ebumnuche. Kama nke ahụ, algorithm na-akpata ya dị mma dịka onye mere ya. Dịka, ị kwesịrị ịjụ onwe gị ihe kpatara onye nrụpụta ga-eji wepụta ihe nzuzo ha trading azum ọ bụrụ na ọ na-akpata nnukwu ego. Na ngwụcha, hụ na ị na-eme ezigbo mbọ site na onye na-eweta azụmaahịa AI tupu ịhapụ ego gị.
Sonyere anyị ma malite ịba ọgaranya na uru bara uru!
Ekwesịrị m iji sọftụwia AI na-ere ahịa n'efu.
Ọ bụ ezie na a na-ekwukarị na ihe kachasị mma na ndụ bụ n'efu - nke a abụghị n'ezie na ọnọdụ azụmaahịa AI. Kama nke ahụ, a free AI robot robot ga-ejedebe na ihe ọ na-enye. E kwuwerị, gịnị kpatara onye nrụpụta ga-eji gbụọ ọtụtụ awa iji mepụta AI trading algorithm, naanị iji nye ya n'efu?
Kedu ka m ga - esi mara ma ụlọ ọrụ azụmaahịa AI enwere ntụkwasị obi?
Site na ọtụtụ puku mmemme azụmaahịa AI na-arụ ọrụ n'ahịa ahụ - ọtụtụ n'ime ha na-ekwupụta na ị na-ekwufe okwu, ikewa ọka wit na igbogbo ọka abụghị ihe dị mfe. Na nke ahụ kwuru, ịkwesịrị ịrụsi ọrụ ike dị mkpa na onye na - eweta ọrụ - yana nke ukwuu, gbalịa nyochaa nsonaazụ AI nke robot.
Ego ole ka sọftụwia ahia AI na-efu?
Enweghị azịza ọ bụla dabara adaba maka ajụjụ a, ebe ọnụahịa ga-adị iche na onye na-eweta ya na ndị na-eweta ya. Site na nke ahụ, ihe ka ọtụtụ nyiwe azụmaahịa AI na-akwụ ụgwọ ndebanye aha kwa ọnwa.
Kedu ka m ga - esi nweta robot azụmaahịa AI m ịgbaso usoro nke m?
Y’oburu n’inwe usoro ahia nke gi nke ichoro iji aka gi mee nye gi, otutu ndi n’enye oru ugbua n’enye gi aka dichaa-na-dobe usoro. Ka o siri dị, ịkwesighi inwe ahụmịhe ọ bụla nke nzuzo!
Enwere m ike ịnwale nwaazụ AI na-ere ahịa m na-enweghị itinye ego m n'ihe egwu?
Platformsfọdụ nyiwe na-enye ụlọ ọrụ anwale ụlọ zuru ezu. Nke a ga - enyere gị aka ịnwale usoro ịzụ ahịa AI gị n’ọhịa, n’enweghị ego ọ bụla.
Kedu klaasị klas m nwere ike ịnweta sọftụwia AI m?
Nke a ga - adị iche na ndị na - eweta ndị na - eweta ihe ga - eweta. Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-azụ ahịa AI nke kwekọrọ na MT4 ma ọ bụ MT5, ị ga-enwe ike ịnweta ma Forex na CFDs.
Kedu ka m ga-esi nweta usoro azụmaahịa AI nke ejiri atụmatụ wuru ewu?
Ọ bụrụ na ị na-achọ itinye aka na azụmaahịa na-akpaghị aka, mana ị nweghị atụmatụ ọ bụla nke aka gị, ụfọdụ ndị na-enye gị ohere ịzụrụ ngwanrọ akpọrọ. Nke a na - enye gị ohere ịzụta atụmatụ nke na - egbo mkpa gị n’enweghị ahụmịhe azụmaahịa ọ bụla.